Taxaabistaydii Iyo Tacaddigii Aan Arkay (20kii Ogos 2016ka illaa 15kii Nofember 2016ka). Qaybta 4aad | Baligubadlemedia.com
Taxaabistaydii Iyo Tacaddigii Aan Arkay (20kii Ogos 2016ka illaa 15kii Nofember 2016ka). Qaybta 4aad
Garsoore Yaxye ayaa aan ku idhi “Horta yaan u xidhanahay?”. “Waxa sheegi doonta xeer-ilaalinta” ayaa uu yidhi. Guddoomiyaha Maxkamadda Gobolka Maroodijeex Axmed Dalmar Ismaaciil oo xafiiskiisa meel ka
baxsan dad kula hadlayay ayaa noo soo galay kolkii uu na arkay. Bariido kaddib waxa uu yidhi “Haddii aad galkiisa berri keeni weydaan waa aan sii deynayaa. Soo celiya berri (Arbaca) haddii Eebbe idmo”. “Waa hagaag” ayaa uu dembi-baadhihi yidhi. Maalintaas waxa ay bahda garsoorku ku canaanteen ciidanka booliska in si sharci-darro ah la ii soo xidhay, sidaas awgeedna loo baahan yahay in dhakhso looga gun-gaadho baadhitaanka igu socda. Iyada oo aan waxba soo kordhin ayaa maalintaasna dib la ii qaaday, waxaana la igu celiyay xaruntii ciidanka dembi-baadhista.
Laba cisho kaddib oo ahayd 02dii Sebtember 2016ka, maalin Khamiis ah ayaa mar saddexaad la i geeyay Maxkamadda, waxaana xafiiska heegan ku ahaa ahaa Garsoore Yaxye Xuseen Cali. Waxa maxkamadda la tusay gal-dacwadeedkaygii. Maalintaas waxa madasha goobjoog ka ahaa walaashay Farduus Maxamuud Gahayr oo ah xeel-dheere sharciga ka baratay Jaamacadda Hargeysa, Garyaqaan Guuleed Dafac Guddoomiyaha Xarunta xuquuqal-insaanka iyo mudan kale.
aaraamiyiin baa haddeer, xaashi soo qoraye
La soco qaybta shanaad haddii Eebbe idmo